नेपाली काँग्रेसको प्रथम प्रदेश अधिवेशन : सभापतिमा पाँच जनाको उम्मेदवारी घोषणा « Anumodan National Daily
By : - मनमोहन स्वाँर
प्रकाशित मिति : १४ मंसिर २०७८, मंगलवार १०:२५
उम्मेदवारहरूका योजना– ०४८ सालको काँग्रेस बनाउनेदेखि पार्टीलाई उद्यमशीलतासंग जोड्ने
धनगढी / नेपाली काँग्रेसको इतिहासमा नै पहिलो पटक प्रदेश संरचना निर्माण हुन गइरहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि काँग्रेसले पनि पार्टी विधानमा प्रादेशिक संरचनाको व्यवस्था गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी १६ र १७ गते कैलालीको धनगढीमा प्रथम प्रदेश अधिवेशन आयोजना हुँदैछ । भने १८ गते विहानबाटै निर्वाचन हुने भएको छ ।
प्रदेश अधिवेशन प्रचारप्रसार समिति संयोजक नृपबहादुर सुनारका अनुसार अधिवेशनमा प्रदेशका नौ जिल्लाका १६ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र ३२ प्रदेश सभा क्षेत्रबाट गरी साढे नौ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।
प्रदेश अधिवेशनका लागि काँग्रेसले केन्द्रीय सदस्य तथा मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा मुल आयोजक समिति गठन गरेको छ । मुल आयोजक समितिको बैठकले पाँच सय एक सदस्यीय आयोजक समिती विस्तार गरेको छ ।
त्यस्तै, काँग्रेस कैलालीका सभापति नरनारायण शाहको संयोजकत्वमा अधिवेशन मुल व्यवस्थापन समिति तथा अन्य सातवटा उपसमिति समेत गठन गरिएको छ ।
प्रदेशको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम जारी छ । यो क्रममा पूर्व राज्यमन्त्री, राजदूत, जिल्ला सभापतिदेखि विद्यार्थी नेताहरूले आआफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । केहीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत त केहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश समितिका अन्य पदमा समेत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम अघि बढेको छ । पछिल्लो पटक कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ का महाधिवेशन प्रतिनिधि उत्तम कठायत तथा अछाम क्षेत्र नम्बर २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि वलवहादुर कुँवरले प्रदेश महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिका लागि पूर्व राज्यमन्त्री गोविन्दबहादुर शाह (अछाम), पूर्व राज्यमन्त्री तथा राजदूत अर्जुनजंग बहादुर सिंह (बझाङ), कैलाली जिल्ला सभापति नरनारायण शाह, कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि हिमवहादुर रावल र डोटीका महाधिवेशन प्रतिनिधि पुष्पकुमार शाहीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश सभापति पदका आकांक्षीहरूले आआफ्नो उम्मेदवारीको स्वाभाविक रहेको दावी गरिरहँदा अनुमोदन दैनिकले सबैलाई समान प्रश्न गरेको छ– तपाईंको उम्मेदवारी “बार्गेनिङ”का लागि हो ? वा स्वाभाविक हो ?त्यस्तै, सबै आकांक्षीहरूलाई सोधियो– तपाईंले कस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेश काँग्रेस बनाउने कल्पना गर्नु भएको छ ? तपाईंका मुख्य एजेण्डाहरू के हुन् ? युवाहरूको पार्टीमा बढ्दो आकर्षणको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र पार्टी र लोकतन्त्रका लागि तपाईंको योगदान के हो ?
विचार र सिद्धान्तका दृष्टिले सुदृढ संगठन मेरो लक्ष्य
नरनारायण शाह मनु (कैलाली)
कैलालीका लगातार दुई पटक सभापति भइसकेका नरनारायण शाहले आफूसंग जित्नका लागि पर्याप्त मतसंख्या रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्– म स्वाभाविक उम्मेदवार हुँ ।
उनले प्रदेशमा सबैभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र (पाँच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र १० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र) भएको कैलालीका अधिकांस प्रतिनिधिको समर्थन आफूलाई रहेको र अन्य जिल्लाबाट समेत ठूलो संख्यामा समर्थक प्रतिनिधिहरू विजयी भएकोले आफू जित्ने दाबी गरे ।
शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश काँग्रेसलाई विचार र सिद्धान्तका दृष्टिकोणले सुदृढ, वैचारिक रुपमा सबल कार्यकर्ता तथा गुटबन्दीको न्युनिकरण आफ्नो प्रमुख अजेण्डा रहेको बताए । भने– यो (प्रदेश समिति) पार्टीको इतिहासमा नितान्त नौलो अभ्यास र संरचना हो । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा थुप्रै चुनौति छन् । पार्टीमा विचार र सिद्धान्त, इतिहासबारे पर्याप्त प्रशिक्षण छैन । त्यसैले कम्तिमा वर्षको तीन महिना कार्यकर्ता प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
शाहले थपे– युवाहरूलाई बढिभन्दा बढि प्रशिक्षित गरेर पार्टीलाई चलायमान बनाउने ठोस कार्यक्रममा मेरो ध्यान केन्द्रीत हुनेछ ।
उनले हरेक संरचनामा ५० प्रतिशत युवा र ५० प्रतिशत अनुभवि पाका कार्यकर्ताहरू समेट्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए ।
२०५० सालमा कैलालीबाट काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनेका शाह छोटो समयमा पार्टीको जिल्ला सभापतिमा पुग्ने नेता हुन् ।
२०५४ सालमा कैलाली तरुण दलको सचिव र ०५६ मा अध्यक्ष भएका उनी ०५८ सालमा पार्टीको सहसचिव बनेका थिए ।
उनी १२ औं महाधिवेशनमा कैलाली जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका थिए भने १३ औं महाधिवेशनमा पनि पुनः जिल्ला सभापतिमा विजयी भएका थिए ।
म सर्वस्वीकृत उम्मेदवार हुँ
अर्जुनजंगबहादुर सिंह (बझाङ)
बझाङबाट दुई पटक सांसद, एक पटक सहायकमन्त्री र राज्यमन्त्री तथा राजदूत रहिसकेका अर्जुनजंगवहादुर सिंह पनि आफू कुनै अन्य पदको बार्गेनिङका लागि नभई स्वाभाविक रुपमा प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार रहेको बताउँछन् ।
“मेरो झण्डै चार दशकको काँग्रेसको राजनीतिक यात्रा र लामो अनुभवले म यो पदको (प्रदेश सभापति) स्वाभाविक र सर्वस्वीकृत उम्मेदवार हुँ” उनले भने– सबै साथीहरूसंग छलफल गरेर नै मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु ।
उनले एकतावद्ध सुदूरपश्चिम काँग्रेस आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । भने– अहिले पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा छ । संसदीय, प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनमा पराजित भएको छ । अब तीन वटै निर्वाचनमा पार्टीलाई विजय दिलाउनु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्दछ । लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई एकतावद्ध गर्दै युवाहरूलाई क्षमताअनुसारको नेतृत्व दिएर र अग्रजहरूको अनुभवलाई सिरोधार्य गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।
२०३६ सालमा नेविसंघको सदस्य बनेर राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका सिंह २०३८ सालमा संघको केन्द्रीय सदस्य र ०४२ सालमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहेका थिए ।
०४० सालमा बझाङ जिल्लाको काँग्रेस सचिव बनेका उनी २०४८ र ०५६ मा बझाङबाट निर्वाचित सांसद, ०५६ मा सहायकमन्त्री, ०६८ मा परराष्ट्र राज्यमन्त्री र ०७४ मा राजदूत बनेका थिए ।
उनले २०३८ सालदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा पटकपटक गरी साढे तीन वर्ष जेल जीवन विताएको बताए ।
मेरो उम्मेदवारी अपरिहार्य नै बनेको
गोविन्दवहादुर शाह (अछाम)
अछामबाट दुई पटक सांसद निर्वाचत तथा एक पटक राज्यमन्त्री बनिसकेका गोविन्दबहादुर शाह आफूले पार्टीका बरिष्ठ नेताहरू, समकालिन साथीहरू र युवाहरू सबैसंग सरसल्लाहबाट प्रदेश सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए ।
उनले भने– बार्गेनिङको त कुरै भएन मेरो उम्मेदवारी स्वाभाविक मात्रै होइन, अपरिहार्य नै भएको छ ।
उनले आफूमा प्रदेश काँग्रेसलाई गोलवद्ध र सुदृढ बनाउन सक्ने क्षमता रहेको दाबी गरे । भने– विचार र सिद्धान्तले प्रशिक्षित कार्यकर्ता पंक्ति निर्माण मेरो पहिलो काम हुनेछ । काँग्रेसमा अहिले मुल्यांकन प्रणाली निकै कमजोर रहेकोले त्यसमा सुधार मेरो काम हुनेछ । त्यसैगरी, साधारण कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय नेताहरू सबैको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास मेरो दायित्व हुने छ ।
उनले एक्काइशौं शताब्दीको चुनौति सामना गर्ने आधुनिक र संगठित पार्टी निर्माण आफ्नो लक्ष्य रहने बताए ।
२०३६ सालमा नेविसंघबाट राजनीतिक यात्रा शुरु गरेका शाह २०३८ सालमा डोटी क्याम्पस इकाईको सभापति र स्ववियु सभापति, ०४३ सालमा त्रिविवि इकाईको उपसभापति, ०४८ र ०५६ मा अछामबाट निर्वाचित सांसद, ०५६ मा सञ्चार राज्यमन्त्री बनेका शाह २०५१ को मध्यावधी र २०६४ को संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका थिए ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा दर्जनौ पटक जेल जीवन विताएको बताउँदै उनले भने– मेरो लक्ष्य छ, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई काँग्रेसको मजवुत किल्ला बनाउने ।
काँग्रेसका आम कार्यकर्तालाई उद्यमशीलतासंग जोड्छु
हिमबहादुर रावल (कैलाली, क्षेत्र नम्बर २)
केन्द्रीय तहका नेताहरू कोही प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवार बनेको खण्डमा बाहेक आफू स्वाभाविक उम्मेदवार बन्ने बताउने कैलाली क्षेत्र नम्बर २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि हिमबहादुर रावलले विगतको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन् ।
उनी भन्छन्– मैले बार्गेनिङका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेको होइन । कोही केन्द्रीय नेता नै सभापतिको उम्मेदवार बन्नुहुन्छ भन्ने सोच्न सकिएला, होइन भने म सशक्त उम्मेदवार हुँ ।
उनले काँग्रेसलाई २०४८ साल अघिको जस्तै बलियो बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए । भने– २०४८ सालदेखि पटकपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताले काँग्रेसलाईलाई केन्द्रीय सत्तामा पु¥याए । अहिले पार्टी निकै लथालिङ्ग अवस्थामा छ । यसलाई पुनर्जीवन दिने हामी सबैको लक्ष्य हुनुपर्दछ ।
उनले काँग्रेसका आम कार्यकर्तालाई उद्यमशीलतासंग जोड्ने गरी आफूले काम गर्ने बताए । भने– मैले साथीहरूसंग मिलेर कर्मभूमि समाज मार्फत पार्टीका क्रियाशील सदस्य, महिला, दलित सबैलाई उद्यमसंग जोड्ने कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छु ।
उनले पार्टीलाई सांगठानिक रुपमा सशक्त, आम कार्यकर्तालाई उद्यमी बनाउँदै चलायमान गर्ने र आउँदो स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पार्टीलाई विजय गराउने आफ्नो कार्ययोजना रहेको बताए ।
२०४८ सालमा काँग्रेसको क्रियाशील सदस्य बनेका रावलले आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न निकायमा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले नेपाल एयरलाइन्सको निर्देशक, विशाल बजार कम्पनीको अध्यक्ष, सहित विभिन्न आर्थिक संस्थामा उच्च पदमा रहेर काम गरेका छन् ।
पुष्पकुमार शाही (डोटी)
सुदूरपश्चिम प्रदेश काँग्रेसको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने मध्ये सबैभन्दा कान्छा (४० वर्ष) पुष्पकुमार शाही पनि आफ्नो उम्मेदवारी स्वाभाविक रहेको दाबी गर्छन् ।
लामो समय नेपाल विद्यार्थी संघमा जिल्लादेखि केन्द्रसम्म जिम्मेवारी बहन गरेका शाहीले भने– म लगातार दुई पटक महाधिवेशन प्रतिनिधि भइसके । नेविसंघमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनिसके । अब मैले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य अथवा प्रदेश सभापतिमा लड्नु पर्छ भनेर साथीहरूसंग छलफल गरेर यो पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु ।
उनले पछिल्ला वर्षहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काँग्रेस निकै कमजोर बनेको बताए । भने– आजका दिनमा प्रदेशका १६ संसदीय क्षेत्रमा एउटा मात्रै सिट काँग्रेसले जितेको अवस्था छ । पार्टीको अवस्था खस्किँदो छ । म सुदूरपश्चिममा काँग्रेसलाई २०४८ सालअघिको जस्तै बलियो पार्टीका रुपमा फर्काउन चाहन्छु ।
शाहीले पार्टीका आम कार्यकर्ताहरूको क्षमता, स्वाभिमान र क्रियाशीलतालाई मुल्यांकन गरेर क्षमता अनुरुपको जिम्मेवारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने बताए ।
उनले आफ्नो योजना बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरे । भने– सुदृढ काँग्रेसले मात्रै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बलियो बनाउन सक्छ । अब हामीले प्रणालीको संस्थागत विकास साथै द्रुत गतिमा आर्थिक समृद्धिको अभियान पनि अघि बढाउनु पर्दछ ।
उनले नयाँ पुस्ताको जोसजाँगर र पुरानो पुस्ताको अनुभव र बलिदानलाई समायोजन गरेर पार्टीलाई अघि बढाउने बताए ।
०५१ सालमा स्कुले विद्यार्थी हुँदाखेरी नै नेविसंघ विद्यालय इकाईको अध्यक्ष बनेको बताउने शाही ०५७ सालमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पस स्ववियु उपसभापति उम्मेदवार, ०६२ सालमा कैलाली वहुमुखी क्याम्पसमा स्ववियू सभापतिको उम्मेदवार, ०६३ सालमा त्रिविवि इकाई उपाध्यक्ष, ०६४ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य र २०७३ सालमा संघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहिसकेका छन् ।